"Umyeni wami ubheka izithombe zobulili ezingcolile nsuku zonke! - memezela abesifazane besimweni esitholwa nge-sexologist. - Lokhu akuvamile! Unami, sonke silele embhedeni. Yini enye ayidinga? ". Lesi simo sivame, kwenzeka ngohhafu (uma kungenjalo) emindenini ejwayelekile, nakuba ngezinye izikhathi kuyisimangalo mayelana nokuqala kwengxabano yangaphakathi kwemindeni. Indlela ongasabela ngayo kumakhosikazi ngokuzilibazisa okungalindelekile komyeni? Futhi kufanele yini senze ngisho nenkinga kulokhu? Indlela yokuqonda ngokuhlakanipha nokungawunaki ubuhlobo? Funda ngakho ngezansi.
Okokuqala, udinga ukuthola amaphuzu amabili asemqoka: iqiniso lokuthi indoda ibukela ama-pornofilms, phambi koxhumana nabo ngokocansi nabajwayelekile futhi abavame ukucasula owesifazane. Abacansi be-sexologists bakholelwa ukuthi inkinga enkulu njengaleyo iqukethe ukusabela okubuhlungu kowesifazane. Kodwa-ke, akusibo bonke abangenangqondo.
Yini enikeza indoda porn.
Abesifazane kaningi, bexoxa nomuntu ngale ndaba, bakhathazeke: "Kungani ebuka? Akujabulisi kimi. Ngiyakholwa ukuthi uma kukhona intsha encane, ekhangayo, enomntwana onjalo omuhle, njengami - kungani kufanele abheke omunye umuntu ?! Mhlawumbe okungavamile? Noma angithandi, njengowesifazane? ". Kuyiqiniso ukuthi kukhona amathuba okungaziphathi kahle, kepha emazweni angama-90% akakho umbuzo wecala noma wezokwelapha. Intshisekelo enempilo enhle yomuntu ophilile ngokuphelele.
Ngisho nalabo abesilisa abenza umsebenzi wabo (izixuku, odokotela, abaqeqeshi bamaqembu ama-fitness) abhekane nokuhamba ngezinyawo noma behamba ngezinsikazi zezinsikazi, wonke umuntu unesithakazelo esifanayo nocansi kunoma ubani omunye. Indoda iyibheka kalula kunabesifazane. Kodwa lona wesifazane uyasola, ucabanga kanje: "Yebo, kodwa sinocansi nje kabili noma kathathu ngesonto. Ngokungazelelwe uyingxenye yokuvuka kwakhe ngokocansi kuchitha lezi films? ". Futhi uma uvela ngaphesheya? Le ndoda, ngenxa yalezi zibuyekezo, isekela injabulo yakhe ezingeni eliphakeme. Mhlawumbe ngaphandle kwalokhu ubulili bekungaba njalo kanye ngesonto? Futhi lokhu akusho ukuthi umkakhe akasamjabulisi futhi. Kalula, i-libido yakhe yenzelwe ukuthi idinga ukuvuselelwa. I-Ion ithola.
Kwenzeka ukuthi indoda idonsela ekubukeni kwe-pornyimu okuhlangenwe nakho okuthile. Uthanda umkakhe futhi ufuna ukuba ngumthandi omuhle kuye. Lona uhlobo oluyinkimbinkimbi, kodwa lo muntu unelungelo lokwenza lokho. Ungacabangi ngokushesha ukuthi inkinga ikuwe. Mhlawumbe kuyinkinga yakhe yengqondo nje kuphela, efuna ukuyixazulula ngale ndlela. Uhlala kahle embhedeni? Ingabe kwenzeke kuwe uma ungazitholi ngokuthanda kwakhe izithombe zobulili ezingcolile? Khona-ke konke kuhle futhi udinga ukubheka izinkinga ngokulingana okulinganayo.
Ngokuvamile abesifazane banomona amadoda abo ukuze babheke izithombe zobulili ezingcolile. Njengokuthi, kukhona i-takerasotki, kodwa angiyinto encane kangaka, anginakuqhathanisa, futhi kukhona konke-okuphelele. " Kodwa qonda: akusizi ngalutho ukuba nomhawu ngezithombe zobulili ezingcolile. Phela, umyeni ngeke akutshele: "Ngiyaxolisa, ngiya ezithombeni ezingcolile futhi manje ngizohlala nayo." Ngomhawu? Masibuke, makajabule, kodwa-ke uzobe eseya embhedeni womshado wenkosikazi.
"Ngimkhanga kakhulu, kubheka izithombe ze-porn!" - Abanye abafazi baphukile. Hhayi, mhlawumbe kunjalo. Bese-ke lo mhlahlandlela wokuthatha isenzo ngowesifazane. Uma uthanda umyeni wakho, faka okungenani umzamo wokuwenza ube mnandi. Uyazi ukuthi kungani amadoda amaningi ethanda izithombe zobulili ezingcolile? Kuqhutshwa ucwaningo, okwakutholakala ukuthi indoda ayifuni nje "ukujuluka" ngesimo sakho sengqondo (ngokuvamile evame kabi ngenxa yokusebenza kanzima kakhudlwana), ukuhlangenwe nakho kwakho ngokomzwelo, ama-preludes akho asekuqaleni, amagama amahle, njll. Lo muntu ucabanga kanje: "Ngiyajabula, ngidinga ukuphumula. Ngizobukela i-pornyoni ngenjabulo yami. Angiyikuya kumkami njengamanje, kungenjalo uzomvusa kuze kube yilapho uliphula, kuze kube yilapho uqonda lokho akufunayo namhlanje ... "Okusho ukuthi, ukusondelana nomkakho ngezinye izikhathi akulula kakhulu kumuntu ojwayelekile. I-porn ilula - ibheka, ivaliwe futhi ikhohlwa.
Yebo, nomzuzwana owodwa obalulekile: ungazami ukuncintisana ne-porn! Ngomqondo wokuthi umuntu kufanele akhumbule njalo ukuthi kuma-movie amafilimu, abadlali abaqeqeshiwe bahlanganyela, kukhona ukudubula okuhlangene, izigcawu zidutshulwa ezinqabeni eziningana, ngezikhathi ezithile ngamahora ambalwa. Kukhona futhi umkhuba okhethekile wokusebenzisa ama-duplicators. Ngakho wena ezimweni ezijwayelekile zasekhaya ngeke ukwazi ukukhiqiza isimo esifanayo nomyeni wakho. Kumelwe uqonde lokhu futhi wamukele njengokungenakugwema.
Uma kuziwa ekuguleni?
Kukhona ukukhangwa kwezingane ezingcolile ezifinyelela emngceleni ongaphezu kwalokho okutholakala khona ukuthi ukutholakala kwezifo. Uma kuyesaba ukushiya izingane kanye naye uma egijima e-TV noma ekhompyutheni ngesikhathi sokuqala futhi iphinde ibuyele ezweni lamafilimu angcolile. Uma ebona noma yini ezungezile, akayidli, akalala futhi aze avele emsebenzini ngenxa yale nkinga, ngakho-ke kuphathelene ne-mania, mayelana nokuxhomeka kwezingane.
Kulokhu, lokhu kuyinkinga yomsebenzi wezifo zengqondo noma ze-psychotherapists. Udokotela kuphela ongachaza ukuthi yiziphi izinsisekelo nezimbangela zalesi sifo esibuhlungu. Kubalulekile ukuthi uphathe umuntu onjalo. Kodwa, ubona, amacala ezinyunithi ezinjalo. Ukukhala okuthiwa "mania" yamanga, okungukuthi, owesifazane ubonakala sengathi umyeni wakhe ukhona. Ngokuvamile lokhu kwenzeka uma umuntu ebuka amavidiyo angcolile ngasese, ehlanganisa ngokucophelela izinkanuko zakhe kumkakhe. Lapha into esemqoka ukuyiqonda: indoda (kanye nabesifazane) kufanele futhi ibe nengxenye yayo siqu. Uma umyeni engazinikeli izifundo zakhe kuwe - unesizathu salokhu. Uma ebona "ukuthungatha" kwakho, lokho akusizi ngokuqondile ukuthuthukisa ubudlelwane bomndeni wakho.
Xoxa kangcono kunokuthula.
Uma ucasulwa ukuthi umyeni uthathwe izithombe zobulili ezingcolile - khuluma naye ngakho. Mhlawumbe indoda izokutshela isizathu salokhu, wena ndawonye uzothola isisombululo, indlela yokuthuthukisa noma nje ushintshe okuthile ekuphileni kwakho kobulili. Mhlawumbe nawe uzozibandakanya kule nqubo. Ukubuka okuhlanganyelwe kwe-porn kungase kubonakale ngisho nempilo yomndeni engaphelele kakhulu. Uzoqonda ukuthi kusekhona okuningi ongakunika.
Uma lona wesifazane enqaba ukukhomba ngaphandle kobulili nawe ngaphandle, kodwa ngesikhathi esifanayo akuqinisekisa ukuthi konke okufanelana naye - makabheke. Ungagcizeleli, ungangeni esikhaleni sakhe siqu. Into eyinhloko ukuthi akafuni kulezi zithombe ukuze ashintshe, kodwa kuphela ephazamisa, ephumula eqinisweni. Futhi ngalokhu futhi yena, nawe, nanoma yimuphi umuntu unelungelo.
Kungani ubuhlobo buphela ngokushesha kangaka? Izizathu Eziphezulu Eziyishumi
Indlela yokuziphatha ebuhlotsheni
Yini okufanele umfana athi kuye ukuba athande othandweni?
Umfazi kufanele abe mnandi futhi omncane
Uyazi kanjani ukuthi yimuphi umfana olungile?
Umculi wabantu u-Albert Filozov washona eMoscow
Ukuzivocavoca kobuso nentamo
Izinyathelo ezinhlanu zeholide elingenakulibaleka
Ikhishi: ukuklama, ingaphakathi
"Kuhle kakhulu" - njalo okokuqala kukho konke
Izitsha ezinhle kakhulu zezingane
USergey Bezrukov waziqhenya ngokuphumelela kokuqala kwendodakazi yakhe, ividiyo
Kulungile kanjani ukuvikelwa okokuqala?
Amagilavu ​​amade anezinwegwe
Izakhiwo eziwusizo zenyama, inhlanzi, izidlo zokudla zasolwandle zempilo